Ishidi Lokucindezela Eliphezulu China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ishidi Lokucindezela Eliphezulu - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ishidi Lokucindezela Eliphezulu)
Ishidi eliphakeme lamede
Ishidi eliphakeme lamede Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukusetjenziswa okuyinkimbinkimbi. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, kuyadingeka kuphela ukuguqula uhlelo...
CNC Sika i-Carbon Fiber Board / ishidi / ipuleti
C NC Sika i-Carbon Fiber Board / ishidi / ipuleti Ishidi le-Fibbon ye-Carbon egcwele, Ishidi le-Carbon Glass Sheet, i-G10 Glass Fiber Sheet yonke esitokweni. Ngenzuzo yekhabhoni ye-carbon fiber : 1 , amandla aphezulu kanye nokusebenza kahle okuphezulu Amandla amancane anezikhathi eziningana kunensimbi ejwayelekile,...
Ishidi le-3k Carbon Sheet polycarbonate
Ishidi le-3k Carbon Sheet polycarbonate Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukusetjenziswa okuyinkimbinkimbi. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, kuyadingeka kuphela...
Ishidi le-fiber ye-Carbon yemoto engahlelwanga endizeni
Ishidi le-fiber ye-Carbon yemoto engahlelwanga endizeni Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukusetjenziswa okuyinkimbinkimbi. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye,...
Ishidi le-carbon 3 sheet elibomvu
Ishidi le-carbon 3 sheet elibomvu Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukusetjenziswa okuyinkimbinkimbi. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, kuyadingeka kuphela ukuguqula...
Ishidi eliyindilinga / isikwele
Ishidi eliyindilinga / isikwele Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukusetjenziswa okuyinkimbinkimbi. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, kuyadingeka kuphela ukuguqula...
Ishidi le-Cnc ukusika i-carbon fiber liyathengiswa
Ishidi le-Cnc ukusika i-carbon fiber liyathengiswa Ngezansi kunezinzuzo zemishini ye- CNC: (1) Inani elikhulu lokunciphiswa kwenombolo yokufakwa kwamathuluzi, futhi izingxenye eziyinkimbinkimbi zezingxenye azidingi ukusetjenziswa okuyinkimbinkimbi. Uma sifuna ukushintsha ukwakheka nosayizi wezingxenye, kuyadingeka...
Ishidi le-HC lenziwe nge-carbon fiber
Ishidi le-HC lenziwe nge-carbon fiber Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu- 400x500mm . Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti engilazi e-fiber. Insiza ye-OEM ne-ODM...
ishidi le-carbon fiber luhlaka lwe-cnc carbon fiber sheet
Ishadi le-Hobbycarbon inkambiso yeli- carbon fiber ifremu cnc carbon fiber sheet I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. I-CNC Carbon Fibre ukusika kuyindlela ekhethekile yokusiza...
CNC Cuting Service Carbon Fiber Board / ishidi / ipuleti
CNC Cuting Service Carbon Fiber Board / ishidi / ipuleti Ishidi le-Fibbon ye-Carbon egcwele, Ishidi le-Carbon Glass Sheet, i-G10 Glass Fiber Sheet yonke esitokweni. Ngenzuzo yekhabhoni ye-carbon fiber : 1 , amandla aphezulu kanye nokusebenza kahle okuphezulu Amandla amancane anezikhathi eziningana kunensimbi...
I-Alibaba colorful Aluminium Lock Nut esezingeni eliphezulu
I-Alibaba colorful Aluminium Lock Nut esezingeni eliphezulu Isingeniso Somkhiqizo I-Aluminium Fasteners ifaka i-aluminium cage nuts flange serated. Uhlobo lwe-M2.5 Cage Aluminium Serrated Nuts yi-flange serated nut. M2.5 amantongomane e-aluminium cage ngokuvamile anodised. Izici zokuzivalela: Ngokomgomo wokuqamba,...
ukusikwa kwe-cnc wokusika i-router carbon fiber ishidi lokuzilibazisa
ukusikwa kwe-cnc wokusika i-router carbon fiber ishidi lokuzilibazisa Ishidi lokusika i-cnc ukusika i-carbon fiber sheet ye-hobby lingasebenzisa ngokugcwele amandla we-carbon fiber kanye ne-modulus ye-elastic, ekwakhiweni kungasusa i-carbon fiber unidirectional Indwangu ye-resin ekwelapheni isigaba, ukusetshenziswa...
Ishidi lengilazi lekhabhoni engu 2mm elisikwe usayizi Diy
Ishidi lengilazi engu-0.5mm-7.0mm ekhishwe ngosayizi Diy Mayelana nokwakheka kweshidi le-Glass sheet engu-0.5mm-7.0mm eklanywe ngobukhulu i-Diy, kungenziwa ku-carbon fiber okuyisisekelo noma ingilazi yefayibha yangaphakathi enobukhulu bekhabhoni fiber, ukuqina kusukela ku-0mmmm kuye ku-50mm, ubukhulu nosayizi obekiwe....
Izinga Eliphezulu le-Alminum Hexagon Flange Lock Nuts
Izinga Eliphezulu le-Alminum Hexagon Flange Lock Nuts I-Aluminium ihlinzeka ukumelana nokugqwala, ingasindi, futhi inamandla okusebenza kagesi. Izinto ezibonakalayo azizenzisi. Emantongomane sinenqwaba ye- aluminium nati, amantongomane angensimbi, insimbi ye-hexagon nati namantongomane e- nylon esitokisini. Futhi...
ishidi le-carbon ingilazi ye-DIY yokusika insiza 2mm
ishidi le-carbon ingilazi ye-DIY yokusika insiza 2mm I- G10 Fiberglass Plates DIY yokusika insiza ye-2mm ingasebenzisa ngokugcwele amandla we-carbon fiber ne-modulus elastic, ekwakhiweni kungasusa i-carbon fiber sheet unidirectional Indwangu ye-resin ephulukisa isigaba, ukusetshenziswa kokusebenza okuphezulu,...
Ishidi le-CNC yokusika i-aluminium sheet
Ukupakisha: izikhwama zepulasitiki
Amandla Wokunikezela: 1000
Min. I-oda: 100000 Bag/Bags
Ishidi le-CNC yokusika i-aluminium sheet Ezingxenyeni zensimbi, siyatholakala nge-aluminium, impahla yensimbi engenasici. Siyakwamukela uthumele isithombe (ifomethi yesinyathelo) ukuze sikwazi ukusicaphuna sakha izingxenye ezahlukahlukene ze-CNC Aluminium ngezinqubo ezilandelayo: I-Precision Machining- I-CNC Milling...
Ishidi lokuhlobisa i-carbon fiber sheet lepulangwe yodonga
Ishidi lokuhlobisa i-carbon fiber sheet lepulangwe yodonga Incazelo Yomkhiqizo: Ishidi lethu le-carbon fiber elingafaki okuqukethwe okungcolile . Usayizi wethu ojwayelekile ngu-400x500mm / 500x600mm futhi sinobukhulu be-0.5-7.0 mm
Ishidi Lokucindezela Eliphezulu Washer Yokucophelela Okuphezulu Ibhodi ye-Fibre yeBanga Eliphezulu Ishidi Lokubeka 3K Ishidi Langempela leCarbon Isikulufu Esiphezulu seFlat Ishidi Le-Forged Sheet Elenziwe Ibhodi Yezindwangu Eziphezulu Zekhabhoni